गुणकारी दही– खाँदा जति मिठो त्यतिनै फाइदा पनि ! – mYKantipur
गुणकारी दही– खाँदा जति मिठो त्यतिनै फाइदा पनि !
काठमाडौं । नियमित दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ। तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त पनि बन्न पुग्छ।
दहीको आर्युवेदिक महत्व छ। यो स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केही यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ ।
यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु–
अमेरिकी आहार विशेषज्ञहरुका अनुसार दहीको नियमित सेवन गर्दा आन्द्राको रोग तथा पेट सम्वन्धी रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्छ ।
–पायल्स रोगबाट पिडित व्यक्तिहरुले दिउसो भोजनपछि एक गिलास मोही पिउँदा फाइदा मिल्छ।
अदुवाको नियमित सेवन– यस्ता छन् अचुक फइदा !